फेरिएको स्टोक्सको परिचय ! - Khelpati
बुधवार, आश्विन ७, २०७७
फेरिएको स्टोक्सको परिचय !
एजेन्सी । सन् २०१६ कोलकत्ताको इडेन गार्डेन्स । आईसीसी टी-ट्वान्टी विश्वकपको फाइनल खेल ।
क्रिकेट इतिहासको एक अविस्मरणीय खेल । वेष्ट इण्डिज र इंग्ल्याण्डबीचको भिडन्त ।
इंग्ल्याण्डले दिएको १ सय ५६ रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा वेष्ट इण्डिजलाई अन्तिम ओभरमा १९ रन आवश्यक रहेको थियो । स्ट्राइकमा थिए ६ बल खेलेर १० रन बनाएका कार्लोस ब्रेथवेट । अन्तिम ओभरको जिम्मा इंग्ल्याण्डका बेन स्टोक्समा थियो ।
ब्रेथवेटले स्टोक्सलाई लगातार ४ छक्का प्रहार गर्दै असम्भव रहेको खेलमा जित दिलाए । र, सबै भन्दा निराश थिए स्टोक्स । कतिपय समर्थकले स्टोक्सलाई घृणा गरे । किनकी सो खेलमा स्टोक्स नै भिलेन देखिए ।
तर, उनी स्टोक्स ३ बर्षपछि इंग्ल्याण्डको सुपर हिरो बनेका छन् । ४४ बर्षे लामो क्रिकेट इतिहासमा इंग्ल्याण्डलाई पहिलो पटक विश्वकप उपाधि दिलाएर उनले राष्ट्रलाई ठुलो खुसी दिलाए ।
घरेलु मैदानमा सम्पन्न १२ औं संस्करणको एकदिवसीय विश्वकपको उपाधि दिलाउन स्टोक्सले मुख्य भूमिका खेले । न्युजिल्याण्डविरुद्ध फाइनलमा ९८ बलमा २ छक्का र ५ चौकाको मद्दतमा अविजित ८४ रन बनाए । यस्तै उनले सुपर ओभरमा ३ बल खेल्दा ८ रनको योगदान गरे ।
न्युजिल्याण्डले दिएको २ सय ४२ रनको लक्ष्य पछ्याएको इंग्ल्याण्डले २३ ओभर १ बलमा ८६ रन बनाउँदा ४ विकेट गुमाईसकेको थियो । पाँचौं विकेटका लागि स्टोक्सले जोस बट्लरसंग १ सय १० रनको साझेदारी गर्दै इंग्ल्याण्डलाई जितको दिशा देखाएका थिए ।
प्रतियोगिता भर स्टोक्सले इंग्ल्याण्डका लागि उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे । ब्याटिङतर्फ १० इनिङसमा ५ अर्धशतक प्रहार गर्दै ४ सय ६५ रन बनाए । उनि इंग्ल्याण्डका लागि सर्वाधिक रन बनाउने तेस्रो खेलाडी बने ।
बलिङतर्फ ५० ओभर ५ बलमा ७ विकेट हात पारेका थिए । फिल्डिङमा उनको प्रदर्शन निकै उत्कृष्ट रहयो ।
यो खुसीको क्षणमा सायद सन् २०१६ को त्यो दुखको पल सम्झनु उचित नहोला तर यसले स्टोक्सको त्यो खराब दिन बिर्साएको छ ।
फाइनलमा गल्ती भयाे - धर्मसेना
सचिनको विश्वकप 'ड्रिम टिम' मा धोनी परेनन्
विलियम्सनको कप्तानीमा विश्वकपको उत्कृष्ट-११ सार्वजनिक
विश्वकपको फाइनलमा अम्पायरको गलत निर्णय !
विलियम्सन 'प्लेयर अफ दि सिरिज'
एस्टनसँग डेभिसको नयाँ सम्झौता
वेस्ट ह्यामका प्रशिक्षक र खेलाडीलाई कोरोना
म्यान्चेष्टर युनाईटेड अघिल्लो चरणमा